Ny Samsung Gear S3 dia manana endrika fiambenana vaovao miasa 3 | Androidsis
Ny Samsung Gear S3 dia namoaka endrika fiambenana "miasa be" telo vaovao izay hahafahan'ny mpampiasa manana fiasana bebe kokoa mivantana amin'ny efijery lehibe amin'ny famantaranandron-dry zareo.
Mba hampahafantarana ireo toeram-piambenana vaovao, fantatra koa amin'ny hoe fijerena endrika na famantaranandro, ny orinasa dia niara-niasa tamina olo-malaza telo, ny Adventurer Bear Grylls, ilay mpaka sary rosiana Murad Osmann ary ilay mpanafika mpamily moto Robert Maddison.
1 Samsung ivelany Watchface
Samsung ivelany Watchface
Ilay Samsung Outdoor Watchface vaovao dia misy altimeter eo amin'ny ilany ankavanana sy barometatra amin'ny ankavia. Ho fanampin'izay, amin'ny faritra ambany dia hanana ny daty sy ny famantarana ny fotoana ianao, raha ao amin'ny arofanina ambony dia afaka mahita ny ora miposaka na filentehan'ny masoandro ianao.
Ity tarehy fiambenana ity koa dia manana fomba manokana amin'ny alina ankoatra ny loko maro azo isafidianana. Etsy ambany no ahitanao ny Bear Grylls manao fanatanjahan-tena amin'ny Gear S3 amin'ity sehatra ity eo amin'ny efijery lehibe.
Ho an'ireo mpankafy dia, ny Samsung Travel Watchface no safidy tsara indrindra, satria afaka mampiseho ny ora sy ny maripanan'ny toerana roa indray mandeha, ary koa ny fanomezana fidirana haingana amin'ny tahan'ny fifanakalozana.
Ity endrika fiambenana ity dia hampiseho aminao ihany koa ny halaviran-dalana namakivaky ny tondro ny My Journey, sy ny sarintany amin'ny antsipiriany ny toerana misy anao ankehitriny.
Mba hampisehoana ny tombo-tsoa azo avy amin'ity fijerena famantaranandro ity dia niara-niasa tamin'ny mpaka sary sy mpivahiny Murad Osmann i Samsung miaraka amin'ny vadiny Natalia (fantatra amin'ny andiany Follow Me or Follow Me)
Ity tarehy fiambenana ity dia natao ho an'ireo atleta sy mpankafy fampihetseham-batana. Eo amin'ny ilany ankavanan'ny dial dia manana fameram-potoana izy, ary eo ankavia kosa dia misy fatraometatra hafainganam-pandeha. Etsy ankilany, mampiseho koa ny tahan'ny fony sy ny isan'ny kaloria may.
Farany, afaka miditra amin'ny sarintany misy ny làlanao ianao amin'ny alàlan'ny mari-pamantarana ny My Journey ary amin'ny alàlan'ny tsindry bokotra roa dia hahazoanao miditra amin'ny sehatry ny endrika Watch.
Etsy ambany no ahitanao ny asan'ny Samsung Sports Watchface amin'ity horonantsary manaraka ity izay niarahana tamin'ny mpitaingina moto Roboss Maddison.
Azonao atao ampidino izao ireo sehatra fiambenana vaovao ho an'ny Gear S3 avy eo amin'ny sehatry ny Gear App Store.
Raha te hahita ny sasany amin'izany ianao endrika fiambenana tsara indrindra ho an'ny Android Wear, aza misalasala manindry ny rohy teo aloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Samsung Gear S3 dia manana endrika fiambenana vaovao miasa 3